प्लूटो टिभी कसरी सक्रिय पार्ने (२०२०) - प्लूटो.टीभी / एक्टिभेट - मनोरञ्जन
प्लूटो टिभी कसरी सक्रिय गर्ने?
स्मार्ट डिजिटल संसारको विस्तार निस्सन्देह मनोरञ्जन लागत मा एक अनावश्यक वृद्धि भएको छ। यसकाे बारेमा साेच। DTH केबलको लागत आज उपलब्ध भएका अनुप्रयोगहरूको मूल्य भन्दा व्यावहारिक थियो। हामी सबैले यी मोटा सदस्यता शुल्क लिन सक्दैनौं। हामी कोहीहरू नि: शुल्क मनोरन्जन चाहन्छौं। यूट्यूब जस्ता सेवा प्रदायकहरू छन्, हामी टिभी केबल जस्तै, केहि अधिक प्रामाणिक खोज्छौं।
यदि त्यसो हो भने, त्यसो हो भने प्लूटो टिभी तपाईंको आवश्यकता पूर्ण रूपमा फिट हुनेछ। यो एक हो नि: शुल्क स्ट्रिमि service सेवा यसले तपाईंलाई सबैभन्दा लोकप्रिय च्यानलहरूको लाइभ फिडमा ल्याउँछ, चलचित्रहरू & खेलकुद विश्वव्यापी यो क्षेत्रिय विशिष्ट छ, जबकि तपाईं VPN प्रयोग यदि तपाईं थप सुरक्षाको साथ विश्व भर बाट सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
प्लूटो टिभी कसरी सक्रिय गर्ने पत्ता लगाऔं!
प्लूटो टिभी अनुकूलता:
प्लूटो टिभीको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पक्ष यसको विश्वव्यापी अनुकूलता हो। तपाईं यसलाई कहिँ पनि पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नि: शुल्क सेवाहरू उपलब्ध गराउन विभिन्न क्षेत्र र देशहरूमा पनि विस्तार हुँदैछ। यदि तपाईंको देशसँग धेरै स्ट्रिमि channels च्यानलहरू छैनन् भने पनि, प्लूटो टिभीले तपाईंलाई उत्तम मनोरन्जन ल्याउने प्रयास गर्दछ।
जे भए पनि, प्लूटो स्मार्टफोन, एन्ड्रोइड, आईओएस, म्याक, विन्डोज, अमेजन, र रोकूको लागि उपलब्ध छ। धेरै स्मार्ट टिभीहरूले प्लूटो टिभीलाई पनि समर्थन गर्दछ, र तपाईं यसलाई नि: शुल्क सामग्री स्ट्रिम गर्न डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्लूटो टिभीको एक उत्तम अंश हो। यो बहुमुखी अनुकूलता छ। तपाईले यसलाई गेमि con कन्सोलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ निर्बाध मनोरन्जनमा पहुँच गर्न।
यहाँ विभिन्न प्लेटफर्महरूमा प्लूटो टिभी स्थापना कसरी गर्ने बारे मार्गदर्शन छ।
Prime० सर्वश्रेष्ठ फिल्महरू प्राइम भिडियोमा हेर्नका लागि
प्लूटो टिभी स्थापना गर्दै:
प्लूटो टिभी खुला प्लेटफर्म हो र आधिकारिक वेबसाइट वा अनुप्रयोग स्टोरहरूमा स्थापनाको लागि उपलब्ध छ। यो पूर्ण रूपमा कानुनी छ, र तपाईं यसलाई स्थापित गर्न को लागी अनुसरण गर्न कुनै छायादार प्रक्रिया छैन। तपाईंले गर्नुपर्ने सबै यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
स्मार्ट उपकरणहरूको लागि -
आधिकारिक स्टोरको भ्रमण गर्नुहोस् (अमेजन, प्लेस्टोर, आईट्यून्स, आदि)
प्लूटो टिभीको लागि खोजी गर्नुहोस्
स्थापना प्रक्रियाको साथ अनुसरण गर्नुहोस्
फायरस्टिक र स्मार्ट टिभीका लागि -
अधिकजसो अमेजन फायरस्टिकक्स प्लूटो टिभी प्रिन्स्टलको साथ आउँछ। यदि यो गर्दैन भने, तपाईं यसलाई आधिकारिक अमेजन स्टोर वा अन्य अनुप्रयोग स्टोरहरूबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंको स्मार्ट टिभी स्थापना गरिएको अनुप्रयोगको साथ आउँदैन भने, तपाईंले वेब ब्राउजर संस्करण प्रयोग गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
व्यक्तिगत कम्प्युटर को लागी -
व्यक्तिगत कम्प्युटरहरूको लागि, तपाईं आधिकारीकमा जान सक्नुहुन्छ प्लूटो टिभी वेबसाइट र डाउनलोडहरूमा जानुहोस्। त्यहाँ, तपाईं प्लूटो टिभी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं विन्डोज स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। Xbox का लागि, तपाइँ यसलाई त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न माईक्रोसफ्ट स्टोरको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
गेमि Con कन्सोलहरूको लागि -
Xbox बाहेक, तपाईं आधिकारिक भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सोनीको स्टोर तपाईंको PS3 वा PS4 को लागि त्यहाँबाट प्लूटो टिभी डाउनलोड गर्न
वेब ब्राउजरहरूको लागि -
वेब ब्राउजरसँग समर्थन अनुप्रयोग वा विस्तार छैन जुन तपाईं प्लूटो टिभी पहुँच गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, तपाई आधिकारिक प्लूटो टिभी.कमान यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ब्राउजरमा सिधा अनुप्रयोग लोड गर्न र नि: शुल्क च्यानलहरू कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना स्ट्रीम गर्न।
प्लूटो टिभीको लागि कुनै सदस्यता योजना उपलब्ध छैन, किनकि यो पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। यसको मतलव कुनै पनी प्रीमियम-ग्रेड सामग्री प्रकार मार्केटि’t योजना छैन तपाईलाई सामग्री दर्ता गर्न र सदस्यता लिन। जहाँसम्म, यदि तपाईं अनुप्रयोग र इन्टरफेस अनुकूलित गर्न अधिक व्यक्तिगत अनुभव चाहनुहुन्छ भने, तपाईं दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
प्लूटो टिभीका लागि साइन अप गर्न चरणहरू:
साइन अप गर्न सजिलो छ।
भ्रमण गर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट वा अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र साइनअपमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं या त Gmail मार्फत साइन अप गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ वा छिटो पहुँचका लागि अन्य विकल्पहरू
तपाईंको जानकारी भर्नुहोस्, र तपाईं जानु राम्रो छ
लग ईन गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको प्रोफाइलमा उपलब्ध सामग्री नियन्त्रण गर्न सक्षम गर्दछ। यसले तपाईंलाई केही च्यानलहरू प्रतिबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने। त्यस्तै गरी, तपाइँ च्यानलहरू वा कार्यक्रमहरू मनपर्नेमा थप्नको लागि नयाँ सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
के त्यहाँ अरू प्लूटो टिभी सक्रियता छ?
हो। रिमोटको रूपमा तपाईंको स्मार्टफोन प्रयोग गर्नको लागि तपाईं बहु उपकरणहरूमा प्लूटो टिभी सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को शब्दमा, यदि तपाइँ पीसीको मोनिटर वा टिभी स्क्रिनमा प्लूटो स्ट्रिम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सजिलैसँग आफ्नो स्मार्टफोन प्रयोग गरेर च्यानलहरू स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसका लागि तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
अनुप्रयोग खोल्नुहोस् वा हेर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट
सक्रियता पहुँच गर्नका लागि सेटिंग्स र गाइडमा जानुहोस्
त्यहाँ रिमोट सुविधा हुनुपर्दछ
टाढाको सुविधामा क्लिक गरेर, यसले प्रमाणिकरण कोड उत्पन्न गर्दछ
तपाईं यस कोड टाइप गर्न सक्नुहुन्छ उपकरणमा तपाईं प्लुटु टिभी सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ
Viola! तपाईंको प्लूटो टिभी कुनै समस्या बिना नै सक्रिय छ। उपकरण सुरु गर्न तपाईसँग प्लूटो टिभी खाता हुनुपर्दछ।
उपकरण कसरी निष्क्रिय गर्ने?
प्लूटो टिभीमा सक्रियता सेक्सनको भ्रमण गर्नुहोस्
तपाईंले डिस्कनेक्ट गर्न चाहानुभएको उपकरणको चयन गर्नुहोस्
त्यसपछि सूचीबाट हटाउनको लागि हटाउन / विच्छेदन क्लिक गर्नुहोस्
तपाई राम्रो हुनुहुन्छ।
के प्लूटो टिभी कानूनी हो?
हो, प्लूटो टिभी कानूनी हो र धेरै स्मार्ट टिभीहरू र अन्य कम्पनीहरूले एक पूर्वस्थापित अनुप्रयोगको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। यदि होईन भने, तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न आधिकारिक प्ले स्टोर भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक अत्यधिक लागत प्रभावी तरीका को सुविधाहरु को उपयोग गर्न को लागी विधि हो केबल टिभी लगभग कुनै पनि उपकरणमा।
वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ तपाइँको TV सेटमा फुर्सत लिनको लागि स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि लागत बिना DTH सेवा प्रदायकको जस्तै। जे होस्, तपाईलाई एक सक्रिय इन्टरनेट सेवा चाहिन्छ (कम्तिमा २.GGHz) यसको कुशलतापूर्वक काम गर्नको लागि।
जस्तो कि तपाइँ अपेक्षित हुन सक्नुहुन्छ, यसको सामग्री समर्थन गर्न, प्लूटो टिभीले तपाईंलाई असीमित स्ट्रिमि services सेवाहरू प्रदान गर्न जारी राख्न टिभी विज्ञापनहरू र विज्ञापन प्रदर्शन गर्दछ। तपाईं यी विज्ञापनहरू छोड्न सक्नुहुन्न, र तिनीहरू प्रायः च्यानलमा निर्मित हुन्छन्। तसर्थ, यो च्यानल नेटवर्कबाट एक सीधा वाणिज्य प्रसारण हो।
प्लूटो टिभीले केहि HD वा 4K HD सामग्री नि: शुल्क प्रदान गर्दछ, किनभने त्यस च्यानलमा केही च्यानलहरू उपलब्ध छन्। यद्यपि HD मा सबै सामग्री र गुणस्तर फरक हुँदैन। जेसुकै होस्, कुनै पनि समयमा कुनै पनि समयमा मनोरञ्जनमा पहुँच गर्न खोज्ने कसैको लागि प्लूटो टिभी पक्कै पनि हुनुपर्छ।
सुधारात्मक रूपमा, प्लूटो टिभीसँग खोजी विकल्प छैन। जबकि यो एक अनुप्रयोग हो, विकासकर्ताहरूले एक अधिक DTH केबल सेवा प्रकार अपील प्रस्ताव गर्न। यसैले, तपाईंले च्यानलहरू मार्फत ब्राउज गर्नुपर्नेछ, र तपाईंले प्रत्यक्ष सामग्रीमा पहुँच पाउनुहुनेछ। त्यहाँ माग मा केहि उपलब्ध छैन।
सर्वश्रेष्ठ डरावनी फिल्महरू हेर्नका लागि
Tubi TV कसरी सक्रिय गर्ने?
कसरी फोन सेट अप X.ms/xboxsetup को साथ Xbox सेटअप गर्ने?
म्याकका लागि उत्तम नि: शुल्क VPN (२०२०) - सेटअप गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो
कसरी मेरो आईफोन खोज्ने अफ गर्ने?
१० निःशुल्क पिट बनाउने सफ्टवेयर तपाईंले प्रयास गर्नुपर्दछ
टिभीमा प्राइम भिडियो कसरी हेर्ने?
डिस्ने प्लस (२०२०) को लागी उत्तम VPN - कहिँ पनि सजीलै हेर्नुहोस्
PUBG स्टीम सुरु गर्न असफल भयो - फिक्स गर्नका लागि गाइड
किन्डल रिडर प्रयोग गरेर पीसीमा पुस्तकहरू पढ्नुहोस् - अब डाउनलोड गर्नुहोस्
प्लूटो टिभी विकल्पहरू - १० सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरू
अनलाइन फिल्महरू नि: शुल्क सुरक्षित हेर्नुहोस्
नि: शुल्क फिल्महरू अनलाइन डाउनलोड बिना नै हेर्नुहोस्
आत्मा अभिभावक को लागी उपहार कोड
टिभी प्रत्यक्ष नि: शुल्क स्ट्रीमि watch हेर्नुहोस्
म कसरी विद्यार्थीहरूको लागि अमेजन प्राइम प्राप्त गर्छु